Na -ere na Amazon Europe - Propars E -mbupụ
Ijikwa ụlọ ahịa Amazon Europe dị mfe na Propars!
Malite ire ngwaahịa gị na mba 5 na Amazon Europe site na ịpị bọtịnụ!
Ọ dị mfe iji Propars ree ya na Amazon Europe!
Ị nwere ike ree ngwaahịa ị gbakwunye na Propars na Amazon Europe site na iji otu ọpịpị.
A na -anakọta iwu site na Amazon Europe n'otu ihuenyo yana iwu ndị ọzọ niile.
Kedu ihe kpatara ndị mmadụ ji azụta ihe n'aka m mgbe ha mepere ụlọ ahịa na Amazon?
"Achọpụtara na ọrịre na Amazon
Ọ bụ ntụkwasị obi nke akara Amazon, ọ bụghị ụlọ ahịa gị. ”
Blog ndị nkwalite: Kedu ihe kpatara m ga -eji ree ihe iri na ise na Amazon?
Yabụ ka anyị bido
Isonyere Amazon na ọkara mbụ nke 2020
ọnụ ọgụgụ nke ndị na -ere ahịa 651.000. Taa kwa 3.145, kwa elekere 131, Ndị na -ere ahịa 2 n'otu nkeji
pụtara. Amazon na ọnụego nke ugbu a
Nde ndị na -ere ahịa nde 1.1 na -esonye kwa afọ.